Opinions & Discussion » သူတို့အမြင် Buddhism	12
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 23, 2016 in Opinions & Discussion, Science & Religion | 12 comments
kai says: သာဓုအကြီးကြီးဗျာ..။
ဘာသာပြန်သူ ကကြောင်ကြီးအပါအ၀င်ပေါ့..။ ဒီလောက်.. ပြောနေတာတောင်.. အတည်မယူ.. ဂွီ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ ဝေဝေဝါးဝါးပါပဲ အူးမာမွပ်ရယ်။ မှားနိုင်တာကိုပဲ သူတို့သိတာ၊ အမှန်ကို မသိသေးပါဘူး။
kai says: ဥပမာအားဖြင့် ရေကို ရွှေခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ငွေခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရိုးရိုးခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ မည်သို့ ခပ်သောက်သောက် ရေငတ်ပြေခြင်းကို ရွှေခွက်တော့ မရှိ၊ ငွေခွက်တော့မရှိ သံသယပွား ပြစ်မှားမိခြင်း သတိပြုရန်လိုသည်။ ထည့်ထားတာ.. ရေမှမဟုတ်တာကိုရင်ရယ်..။ ကိုရင်တို့.. ပညတ်နဲ့.. ပရမတ်လုံးလည်လိုက်နေသူတွေအတွေးအရကောက်ရင်.. H20 လည်းမဟုတ်.. H လည်းမဟုတ်.. ။ H ကိုရေးတဲ့.. ဘော်ပင်ရဲ့မှင်လည်းမဟုတ်..။ အဲဒီမှင်ရဲ့ အရောင်လည်းမဟုတ်..။ မှင်အရောင်ရဲ့ အမည်လည်းမဟုတ်.. ။ အမည်ဆိုတာကလည်း.. အမည်မဟုတ်..။ အနဲ့မည်ပေါင်းတာလည်းမဟုတ်..။
ဘာဘာ ဘာမှမဟုတ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ムラカミ says: ဖိုက်ဖစ်ဖတိ ဇာတ်တော်တေကို တခုဘ၀င်မကျပုဗျာ…
kai says: အဲဒါတွေက..
ဘုရားလောင်း.. တီရက်စ် ဇတ်လမ်းလေး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: မူးလိုက်တာ…
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဇတ်ကိုပေါင်းသော်……ဘာဘာ ဘာမှမယုံချင်တော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: တခုစဉ်းစားမိတာ စာရေးသူ ပြောသွားတဲ့ အချက်၆ – ဗုဓ်ဓ ဘာသာသည် မူလက သာမန်မျှသာ၊ နောင်နှစ်၃၀၀အကြာ အာသောကမင်းတက်မှ ကြီးပွားတယ်။ ကြော်တို့ ငယ်စဉ်က သိမှတ်လာတဲ့သာသနာ့သမိုင်းမှာ အဲဒီမတိုင်ခင် အဇာတသတ်မင်းကြီး ရှိတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သာသနာပြုခဲ့တယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆို သူ့အလွန် သူ့လောက် ဘုန်းမရှိသူမင်းလက်ထက်မှာ သာသနာဆက်ပြုနိုင်ဖို့ ရံပုံငွေ ရွှေအိုးကြီးတွေမြှုပ်တယ်။ အသောကမင်းလက်ထက် တူးဖေါ်တွေ့တော့ သူလိုမင်းအတွက် မဟုတ်ဆိုပြီး မယူဘူး၊ ပြန်ထားခဲ့တယ်။ ဓါတ်တော်မွေတောာ်တွေပဲ ယူတယ်။ ယုန်ယုန် ပဒတ် ပဒတ် ပြောချင်တာ အဇာတသတ်မင်း အကြောင်း အခုပို့စ်ထဲမပါ။ သမိုင်းမှာတော့ အဇာတသတ်သည် ဘုရားရှင်ဒကာရင်း ခမည်းတော် ဗိန်မသာရမင်းကြီးကို သတ်ခဲ့သူ၊ ဒေဝဒတ်နဲ့ ပေါင်းရိုက်ခဲ့သူ။ ကိုယ်မှားသလား သူမှားသလား… ဒန် တန့် တန်…။ အူးမာမွပ် ခင်ဗျား တေတင့်တယ်။။။။။
kai says: ပေါက်တပ်ကရ… ကိုရင်ရယ်..။
ဦးကြောင်ကြီး says: UNNAO, India (AP) — Archaeologists began digging for treasure beneatha19th century fort in northern India on Friday, afterapopular Hindu holy man saidaformer king appeared to him inadream and told him ofanearly $50 billion cache.
ဦးကြောင်ကြီး says: About $22 Billion In Gold, Diamonds, Jewels Found In Indian Temple
kai says: 1. 1794/5 Flowing hair silver/copper dollar ($10 million)